डाँडाबजारका जनप्रतिनिधिसँग वाणिज्य संघवीच छलफल – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
डाँडाबजारका जनप्रतिनिधिसँग वाणिज्य संघवीच छलफल
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार २२:०६
धनकुटा । धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघको टोलीले साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ डाँडाबजारका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी कोरोना भाईरसविरुद्ध संचालन भैरहेको अभियानको वारेमा छलफल गरेको छ । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राई, कोषाध्यक्ष रुपेश श्रेष्ठ, सदस्य परिवर्तनराज पौडेललगायतका टोलीले गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष पलकबहादुर बस्नेतसँग बजारको अवस्था र कोरोना भाईरस फैलिन नदिई नियन्त्रण गर्न वडा समितिबाट भैरहेको प्रयासको वारेमा परामर्श गरेका थिए ।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष राईले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन उद्योग बाणिज्य संघले सहज आपुर्तिका लागी सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । सो अवसरमा संघले वडाध्यक्ष बस्नेतलाई वडा कार्यालयका लागी मास्क, सेनिटाईजर र पञ्जासमेत प्रदान गरेका थिए ।
यसैगरी संघले एवाई कन्स्ट्रक्सन धनकुटाले निर्माण गरिरहेको डाँडाबजार — याक्चाना सडकको मजदुरहरुलाई कोरोना भाईरस संक्रमण हुनबाट बच्नका लागि मास्क र सेनिटाईजर वितरण गरेका थिए । सो अवसरमामा संघकापदाकिारीहरुले मजदुरहरुलाई संक्रमणबाट बच्ने तरिका, सामाजिक दुरी निर्धारणका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
सोहि दिन संघले सो क्षेत्रको आन्तरिक बजार अनुगमन गरेका थिए । टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघका सहसचिव हरिबहादुर लम्जेल, संचारकर्मी इश्वर थापालगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो ।